Ny Fanjakan'Andriamanitra - Fiangonan'Andriamanitra Soisa manerantany
Iza moa izahay? > Mino ny WKG > Ny fanjakan'Andriamanitra
Ny famonjena dia teny amin'ny ankapobeny. Nilaza i Paul fa voavonjy isika (Efesiana 2,8), voavonjy isika (2 Korintiana 2,15) ary hovonjena isika (Romana 5,9). Nomen'Andriamanitra famonjena isika ary manantena antsika izy hamaly azy amin'ny finoana. Jaona dia nanoratra momba ny famonjena sy ny fiainana mandrakizay ho toy ny zava-misy ankehitriny, fananana (1 Jaona 5,11: 12) ary fitahiana ho avy.